Mpiara-miasa amin'ny Selo Group miaraka amin'i Chef Meyrick malaza mba hampivelatra ny traikefa amin'ny fahandroan-tsakafo
Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Mpiara-miasa amin'ny Selo Group miaraka amin'i Chef Meyrick malaza mba hampivelatra ny traikefa amin'ny fahandroan-tsakafo
culinary • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny Selo Group dia mpiara-miasa amin'i Chef Will Meyrick
Selo Group, orinasa iray mpandresy nahazo loka sy niorina tanteraka tao Singapore, dia nanambara mpahandro fanta-daza iraisampirenena sy mpitrandraka trano malaza Will Meyrick ho mpiara-miasa aminy vaovao.
Ny chef dia hampivelatra traikefa mahandro vaovao ho an'ny tetikasan'i Selo.
Meyrick dia nanjary anaram-pianakaviana tao Indonezia miaraka amina trano fisakafoanana fito mahomby eo ambanin'ny fehikibony.
Selong Selo Resort & Residences, izay nisokatra teny amin'ny morontsirak'i South Lombok any Indonezia tamin'ny 2016, no voalohany nahita ny zavakanto nahandro an'i Meyrick.
Meyrick hitondra ny fahaizany manan-karena hampivelatra traikefa mahandro vaovao ary hanara-maso ny fandaharana momba ny sakafo sy zava-pisotro ho an'ny tetikasan'i Selo, anisan'izany ny fananana amboara voalohany Selong Selo Resort & Residences any Lombok, Indonezia.
"Fantatr'i Will tsara ny tsenan'i Indonezia ary efa mpandraharaha nahomby tao nandritra ny 25 taona mahery izy satria tompona trano fisakafoanana maromaro any Bali, noho izany dia izy no kandidà lavorary hitarika ny ezaka mahandro sakafo ho an'ny tetikasanay", hoy i Andrew Corkery, Vondrona SeloTale jeneraly. "Fantatray fa hankafy ny fahaizany mamorona, ny fahalalàny be dia be ary ny fitiavany tsara ny fitsangatsanganana sy ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny sakafo ny vahiny."
Mpisava lalana amin'ny sehatry ny sakafo, Meyrick dia nanangana laza tamin'ny fanindriana ny fetra. Ny asany dia nitarihany azy avy tany Londres ka hatrany Sydney ary nony farany dia nankany Azia atsimo atsinanana, izay toerana onenany ankehitriny. Rehefa avy niasa tamina trano fisakafoanana roa nalaza tany Sydney i Meyrick dia nitady asa vaovao tany Indonezia, Thailand ary Hong Kong ary nifankatia tamin'ny nosy kelin'i Bali, toerana nanorenany ny fanjakan'ny fisakafoanana, Sarong Group.
Nanjary anaram-pianakaviana tao Indonezia izy niaraka tamin'ny trano fisakafoanana fito nahomby teo ambanin'ny fehikibony, toy ny Sarong, Mama San, Hujan Locale any Ubud, Japoney Billy Ho Izakaya any Canggu, ary Monsoon any Central, Hong Kong. Ho fanampin'ny portfolio-n'ny trano fisakafoanana sy boky fandrahoan-tsakafo, Meyrick dia azo jerena amin'ny andraikitra mitohy amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra nasionaly sy iraisampirenena toa ny lozisialy Top Chef any Indonezia ary Back to the Streets ao amin'ny Asian Food Channel, ary koa ny andiany YouTube sy Discovery Channel.
Selong Selo Resort & Residences, izay nisokatra teny amin'ny morontsirak'i South Lombok any Indonezia tamin'ny 2016, no voalohany nahita ny zavakanto nahandro an'i Meyrick. Ny trano dia 25 minitra avy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Lombok ary manolotra villa mihaja mihoatra ny 50 misy efitrano fatoriana iray ka hatramin'ny fito, spaoro feno, trano club, Aura Bar & Lounge, klioban'ny ankizy ary fidiran'ny klioba amoron-dranomasina. Eo akaikin'ny toeram-pialan-tsasatra dia misy villa fialan-tsasatra manokana miisa 20 azo amidy ao amin'ny studio, safidy iray na roa-efitrano fatoriana miaraka amin'ny dobo filomanosana tsy miankina.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Selo Group sy ireo tetik'asany dia tsidiho azafady www.velomaso.co
Momba ny vondrona Selo
Selo Group dia manana rakitsoratry ny fananganana kalitao, trano fandraisam-bahiny lafo vidy ary villa ara-potoana sy ara-bola, hatramin'ny fenitra iraisam-pirenena avo indrindra. Ny maodelin'ny orinasa dia miorina manodidina ny fahazoana, fampandrosoana ary fiasa. Ny ekipa iraisam-pirenena efa za-draharaha amin'ny orinasa dia manara-maso ny famolavolana, ny varotra sy ny varotra, ny asa ary ny trano fandraisam-bahiny sy fandraisam-bahiny. Selo Group dia manome karazana fampandrosoana, fananganana, asa ary serivisy fitantanana isan-karazany, manara-maso ireo tetikasa hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany miaraka amina fanoloran-tena matanjaka amin'ny faharetana. Amin'ny alàlan'ny fampidirana mitsivalana, ny vondrona dia misambotra ny fahombiazany amin'ny famolavolana, ny varotra ary ny tsanganana miorina amin'ny dovetail miasa. Ny teknolojia maitso sy ny endrik'i Selo dia mampiseho ny fanolorantenany ny toro lalana maharitra amin'ny fombam-panorenany, ny asany anatiny, ary ny fifandraisany amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny tontolo voajanahary.